सौन्दर्य | Nepali Health - Part 3
August 16, 2019 August 17, 2019 Nepali Health Comment
एक सौन्दर्यकर्मीले आफ्नो उपचारबारे बनाएको प्रेरक भिडियो
August 10, 2019 August 11, 2019 Nepali Health Comment
सौन्दर्यसम्बन्धी भिडियो बनाएर चर्चित भएकी दक्षिण कोरियाली सौन्दर्यकर्मी डोअन लीलाई गत फेब्रुअरीमा एक प्रकारको रक्त क्यान्सर लागेको थाहा भयो। त्यसयता उनले क्यान्सर उपचारको जानकारी आफ्नो युट्युब च्यानलमा गर्न थालेकी छन् ।
July 22, 2019 Nepali Health Comment
कपाल झर्नबाट कसरी रोक्ने ? अपनाउनुहोस् यी तरिका
July 20, 2019 Nepali Health Comment
अण्डा र ग्रीन टी : अण्डा खानाले शरीरलाई जति नै फाइदा गर्छ त्यतिनै कापालका लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ । अण्डामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटीन हुन्छ । त्यसैले एक वटा अण्डाको सेतो भाग र दईचम्चा ग्रीन टीको पेस्ट बनाएर कपालको जरासम्म लगाउनुहोस् र आधाघन्टा पछि सफा पानीले धुनुहोस् ।
July 16, 2019 July 17, 2019 Nepali Health Comment
बर्षाऋतुमा दैनिकजसो कतिबेला पानी पर्छ भन्न सकिन्न । बाहिर या काममा निस्किँदा हल्काफुल्का भएपनि जोकोही युवतीले मेकअप गरेकै हुन्छन् । त्यसो त अधिकांशले सामान्य सौन्दर्यका समाग्रीहरु हरेकजसो ब्यागमा बोकेकै हुन्छन् ।
July 10, 2019 July 11, 2019 Nepali Health Comment
आँखा करीब २० लाख भागहरु मिलेर बनेको हुन्छ । आँखाको कोर्निया शरीरको एक मात्र त्यस्तो तन्तु हो जसमा रगत प्रवाह हुँदैन ।
यी हुन् बर्षाको समयमा सौन्दर्य जोगाउने पाँच उपाय
June 23, 2019 Nepali Health Comment
बर्षाको मौसममा तपाईंको हात, अनुहार र खुट्टाको सफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सम्भव भएसम्म दिनमा दुईपटक राम्रो फेसवासले अनुहार सफा गर्नुहोस् ।
May 30, 2019 Nepali Health Comment
१. प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने गर्नाले शरीरका बिकार तत्व बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ र त्वचा आकर्षक र सुन्दर बन्छ । २. अनुहार गर्दनका साथै हात खुट्टामा मस्चराइजर गर्नुहोस् यसले तपाइँको छालामा भएको चाउरीपन हटाउन मद्दत गर्छ ।
May 21, 2019 May 22, 2019 Nepali Health Comment
सुन्दर बन्न प्रयोग गरिने कस्मेटिक्समा केमिकल मिसाइएका हुन्छन् । त्यस्ता केमिकल हाम्रो छालामा रहेका स–साना प्वालबाट छिरेर रगतमा मिसिन सक्छ ।
May 17, 2019 May 18, 2019 Nepali Health Comment
नरम कपडालाई चिसो दूधमा डुबाई त्यसले छालामा मालिस गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । घाममा निस्कनुअघि सनस्क्रिन लगाउन नभुल्नुहोस् । घिउकुमारीले तपाईंको अनुहारमा हुनसक्ने जलनलाई कम गर्छ । त्यसैले डढेको छालामा घिउकुमारीको चोप लगाउनुहोस् ।